को रक्सी संग्रह के हो? यो aperitifs बताइरहेका, मूल बलियो मादक पेय छ। एउटा सुन्दर प्याकेजमा रक्सी संग्रह सधैं विलासी र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ। नै, सुरिलो नरम र नाजुक स्वाद अलग पिउन। यस मामला मा, यो वर्तमान र केही pungency छ। चकलेट resinous टन स्थिर धनी स्वाद अर्क सूक्ष्म टिप्पणीहरू महान esters र विदेशी रंग सही सन्तुलन छन्।
रक्सी संग्रह - आत्माहरू राजा
त्यसैले थप। रक्सी कलेक्टर - सबैभन्दा को दुनिया मा महत कडा रक्सी। धन्यवाद अनावश्यक, एक पेय सिर्जना, यो जो मा बलियो रक्सी को विश्व बजार खण्डमा धेरै जग हो। ढिला रक्सी कलेक्टर पर्याप्त उच्च मूल्य अलग छ। यो कहिले काँही decanter लागि एक लाख rubles सम्म पुग्न सक्दैन।
सामान्य मा, एक राम्रो रक्सी - आत्माहरू संसारमा वास्तविक राजा हो। यसबाहेक, यो सम्राट द्वारा सकिन्छ! केही आफ्नो आभा छैन तुलना गर्न सकिन्छ। एक धनी स्वाद ", को देवताहरूको पेय" यो एक वास्तविक बनाउँछ विक्टर ह्यूगो अनुसार। ब्रान्डी निर्माण प्रविधि - सबैभन्दा स्पष्ट र कडाई नियमन। रक्सी को सबै भन्दा कठिन र महँगो क्षेत्र रक्सी को उत्पादन हुन्छ। विशेष मा, यसको जोखिम।
उमेर धूलो रक्सी को इतिहास ढाकिएको। दन्त्यकथा र वास्तविकता, र महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसन्धान को असाधारण धारणा सबै प्रकारका यसको विकास सबै तरिका मा एक पेय सँगसँगै छ - वर्तमान दिन गर्न मूल देखि। तर एक वास्तवमा यो असम्भव चुनौती निश्चित छ। रक्सी मा अंगूर रक्सी को Crusades को समयमा लाग्नेछन् गर्न थाले। खैर, र ब्रान्डी बाहिर एकदम दुर्घटना द्वारा गरियो। तर, म नुस्खा मालिकको सम्झना।
कलेक्टर ब्रांडीको "Ararat" धेरै जटिल जीव रसायन रूपान्तरणहरू विशाल अंगूर रस मा पदार्थ को सामाग्री को तयारी र आसवन समयमा समूह आधारित प्रविधिहरू प्रयोग उत्पादित। धेरै महत्त्व पनि लामो समय को लागि ओक व्यारेल मा वृद्ध छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा - अङ्गुरको गंध। प्रकाश पुष्प टिप्पणीहरू संग विभिन्न विशिष्ट, सफा गंध को किसिमहरु को सबै भन्दा। भविष्यमा, गंध बिस्तारै प्राविधिक उपचार र जीव रसायन अन्तरक्रियामा एउटा बरु जटिल फूलगुच्छा धन्यवाद परिवर्तन गरिएको छ।
रक्सी "Ararat" संग्रह ( "Dvin") - vysokogradusny maloekstraktivny ब्रांडेड पेय COP समूह छ। यो 1945 मा फिर्ता सुरु जारी। रक्सी फरक गाढा सुनको रंग। यसलाई देखि बनेको छ ब्रांडीको आत्माको एक दशक लागि उमेर, उत्कृष्ट युरोपेली अंगूर किसिमहरु देखि उत्पादन। यो आर्मेनिया मा विशेष उब्जाउ गरिन्छ। बलियो पेय 50% Vol समावेश गर्दछ। रक्सी, 0.7% चीनी। "Ararat Dvin" को एक संग्रह समाप्त रक्सी को जोखिम, अनुभवी द्वारा, बारी मा, व्यारेल मा तीन वर्षसम्म प्राप्त गर्नुहोस्।
र अन्तमा। रक्सी "Dvin" संग्रह महंगा उच्च गुणस्तरीय आत्माहरू सिद्ध उपहार पारखी छ। लागि ओक व्यारेल मा दस वर्ष अवसर को नायक प्रभावित विफल हुन सक्दैन पकड। छोटो मा, यो रक्सी अर्मेनियाई संग्रह मा एक साँचो मणि छ।
प्रसिद्ध मास्टर र येरेवन मा winemaker ब्रांडीको कारखाना - पी 1945. एम Sedrakyan सिर्जना भएको थियो। "Ararat Dvin" बारम्बार सोभियत संघ र बाहिर सम्मान गरिएको थियो। यसको अस्तित्व को सबै समयको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु मा यो तेह्र पदक सम्मानित गरिएको छ।
धेरै उच्च pyatidesyatigradusnaya रक्सी महल विशेष एक अविश्वसनीय परिष्कृत स्वाद फूलगुच्छा धन्यवाद महसुस छैन। यो पेय - साँचो लिजेन्ड। यो अत्यन्तै कठिन प्रविधि पकाउन दोहोर्याउनुहोस्। 2011 देखि, को पेय नयाँ प्याकेजमा आउँछ। त्यो गर्न मद्दत गर्न सक्छ तर मध्ययुगीन आर्मेनिया को राजधानी को सम्झाउन। वास्तवमा रक्सी र Dvin नाम अन्तर्गत पुरातन शहर पछि नाम थियो।
सामान्य मा, संक्षेप। यो अद्भुत पेय को एक मिश्रण बस भव्य छ। आफ्नो बहु-faceted र जटिल को गंध। रक्सी स्वाद लामो सुखद aftertaste पछि छोडेर बिस्तारै प्रकट गरिएको छ। मूल्य, को पाठ्यक्रम, फ्रान्सेली cognacs लागत तुलना। तर, यस्तो कुनै पनि मामला मा तपाईं अधिग्रहण निराश छैन। पेय पनि पर्याप्त सबै भन्दा राम्रो उत्कृष्ट संग्रह Replenish गर्न सक्नुहुन्छ।
एकल MALT व्हिस्की: दर्जा। एकल मल्ट व्हिस्की: नाम मूल्य
के पेय रक्सी
विनीज बियर "Khamovniki" को प्रकार। बियर "Khamovniki": विवरण, समीक्षा
मा होटल पोर्टो गाउँ3रहन *
JBL (वक्ता): समीक्षा मोडेल को वर्णन, खुट्टामीटर को विकल्प
"पानी स्टप" (waterproofing): आवेदन र समीक्षा
ज्वरो जरा सलाद
क्यान्सर कक्षहरू मा आवश्यक परीक्षण
चिकन संग पनीर सूप: एक सहि पहिलो कोर्स को लागि एक नुस्खा
को कर्मचारी द्वारा एक रोजगार सम्झौता को समापन: व्यवस्था राख्न!